တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	“တရားမဝင်အစိုးရ၊စိတ်မချနဲ.”	October 31, 2009
မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့ဗမာစစ်အစိုးရက သူတို.ကို တရားဝင်အစိုးရသလိုလိုလုပ်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုတွေဆီကနေ ပြည်ပအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အခွန်ငွေပေးဆောင်ရမည်ဆိုပြီးလုပ်လာတယ်၊ဗမာစစ်အစိုးရကိုပြည်သူလူထုကိုယ်စားတိုင်းရင်းသားအသံကနေ ပြောချင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို.ဟာ တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူး၊ခင်ဗျားတို.ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားပါလျက် တိုင်းပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု၊မတရားညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်ကြောင့်ပြည်ပမှာအလုပ်သွားလုပ်နေရသူများကနေအ ခုလိုအခွန်ငွေဆိုပြီးလုပ်လာတာဟာတော်တော်ကိုလွန်နေပြီ၊ထပ်ပြောပါမည်၊ခင်ဗျားတို.ဟာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူး၊ လူထုတွေဆီကနေ ဓားမြတိုက်တာကလွဲရင်အခွန်ငွေကောက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ၊တိုင်းရင်းသားပြည်သူလုထုအနေနဲ. ဒါကို လူထုတို က်ပွဲ၊အာဏာဖီးဆန်မှုတိုက်ပွဲပုံစံဖြင့် အခွန်ငွေကိုမဆောင်ကြပါနဲ.၊ဆောင်စရာမလိုဘူး၊စစ်အစိုးရအားပေးဆောင်ရမည့်ငွေ တွေကိုကိုယ်အဖွဲ.နဲ.ကိုယ်စုထားပါ၊စစ်အစိုးရကိုပြန်တိုက်ရန်အတွက်သုံးစွဲပါ၊ခင်ဗျာတို.မဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အကယ်၍ ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်လာရင် ထောင်မဆန်.နိုင်ပါ၊ပို.စတာတွေ၊စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ. “တရားမဝင်အစိုးရ၊စိတ်မချနဲ.” `“နအဖအားအခွန်ငွေများ၊ဆောင်စရာမလိုအပ်ပါ” “ တရားဝင်အစိုးရပေါ်လာမှ၊စိတ်ချဆောင်ကြပါ”
နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအခွန်နှင့် မိသားစုထံငွေလွှဲမှုများစိစစ်ကြီးကြပ်တော့မည် ကောင်းဝါသတင်းဌာန
စစ်အစိုးရမှ အမိန့်ကြေငြာချက် အမှတ် ၁၆/၂၀၀၉ ဖြင့် စက်တင်ဘာ(၅)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် အခြားအစိုးရဌာနများ၊ လူမှုရေးအသင်းများမှ ပြည်ပသို့အလုပ်လုပ် ခွင့် စေလွှတ်နေမှုများကိုလည်း စိစစ်ကြီးကြပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။